Nzaghachi gọọmentị maka COVID-19 Delta na-emerụ mgbake njem ụgbọ elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Nzaghachi gọọmentị maka COVID-19 Delta na-emerụ mgbake njem ụgbọ elu
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Nsonaazụ Ọgọstụ na -egosipụta mmetụta nke nchegbu dị iche iche Delta na njem ime ụlọ, ọbụlagodi njem mba ofesi na -aga n'ihu na ngagharị iji nweta mgbake zuru oke nke enweghị ike ime ruo mgbe gọọmentị weghachite nnwere onwe ime njem.
Mkpokọta maka njem ụgbọ elu na Ọgọst 2021 gbadara 56.0% ma e jiri ya tụnyere Ọgọst 2019.
Nke a bụ ahịa ahịa ụlọ, nke gbadara 32.2% ma e jiri ya tụnyere Ọgọst 2019, nnukwu mbibi site na July 2021.
Ihe ndị njem mba ofesi chọrọ n'August bụ 68.8% n'okpuru Ọgọstụ 2019, nke bụ nkwalite ma e jiri ya tụnyere ọdịda 73.1% edere na July.
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) mara ọkwa na mgbake njem ụgbọ elu aghọọla n'ọnwa Ọgọst ma e jiri ya tụnyere Julaị, dịka ihe gọọmentị mere maka nzaghachi maka nchegbu dị iche na Delta COVID-19 gbubiri nke ukwuu na njem njem ụlọ.
Willie Walsh, obodo ntàOnye Director General
N'ihi na ntụnyere n'etiti nsonaazụ 2021 na 2020 kwa ọnwa na-agbagọ site na mmetụta pụrụ iche nke COVID-19, belụsọ ma ekwuru na ntụnyere niile bụ na July 2019, nke gbasoro usoro chọrọ.
Mkpokọta ihe achọrọ maka njem ụgbọ elu na Ọgọst 2021 (tụrụ na kilomita ndị njem ma ọ bụ RPKs) gbadara 56.0% ma e jiri ya tụnyere Ọgọstụ 2019. Nke a bụ akara nwayọ site na Julaị, mgbe ọchịchọ dị 53.0% n'okpuru ọkwa July 2019.
Nke a bụ ahịa ahịa ụlọ, nke gbadara 32.2% ma e jiri ya tụnyere Ọgọst 2019, nnukwu mbibi site na Julaị 2021, mgbe okporo ụzọ gbadara 16.1% karịa afọ abụọ gara aga. Mmetụta kacha njọ bụ na China, ebe India na Russia bụ naanị nnukwu ahịa gosipụtara nkwalite otu ọnwa ruo ọnwa ma e jiri ya tụnyere Julaị 2021.
Ihe ndị njem mba ofesi chọrọ n'August bụ 68.8% n'okpuru Ọgọstụ 2019, nke bụ nkwalite ma e jiri ya tụnyere ọdịda 73.1% edere na July. Mpaghara niile gosipụtara mmụba, nke nwere ike ibute ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa yana obere mgbochi mgbochi mba ofesi na mpaghara ụfọdụ.
Nsonaazụ Ọgọstụ na -egosipụta mmetụta nke nchegbu dị iche iche Delta na njem ime ụlọ, ọbụlagodi njem mba ofesi na -aga n'ihu na ngagharị iji nweta mgbake zuru oke nke enweghị ike ime ruo mgbe gọọmentị weghachite nnwere onwe ime njem. Banyere nke ahụ, ọkwa US mere n'oge na -adịbeghị anya iji bulie mmachi njem site na mbido Nọvemba na ndị njem ọgwụ mgbochi zuru oke bụ ozi dị mma na ọ ga -eweta nkwenye n'ahịa dị mkpa. Mana ihe ịma aka ka dị, ntinye akwụkwọ Septemba na -egosi mmebi na mgbake mba ofesi. Nke ahụ bụ akụkọ ọjọọ na -abanye na nkeji anọ nke anọ nwayọ nwayọ, ”ka o kwuru Willie Walsh, obodo ntàDirector General.
Ọgọst 2021 (% chg vs otu ọnwa na 2019)
PLF (% -pt)2
Africa 1.9% -58.0% -50.4% -11.5% 64.0%
Asia Pacific 38.6% -78.3% -66.5% -29.6% 54.5%
Europe 23.7% -48.7% -38.7% -14.4% 74.6%
Latin America 5.7% -42.0% -37.7% -5.8% 77.4%
Middle East 7.4% -68.0% -53.1% -26.0% 56.0%
North America 22.7% -30.3% -22.7% -8.6% 78.6%
Ndokwa Admin ekwu, sị:
October 20, 2021 na 13: 21
شات العراق شات عراقي شات عراقنا شات ذهبرد عراقية شات صوتي